Farmaajo oo ku dhawaaqay xaalad Dagaal +sabata | Booqasho.org News Online - Tabiyaha Wararka Xaqiiqda Ah
Home Wararka Maanta Farmaajo oo ku dhawaaqay xaalad Dagaal +sabata
Farmaajo oo ku dhawaaqay xaalad Dagaal +sabata
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullahi Farmaajo ayaa ku dhawaaqay inuu dalku galay xaalad dagaal, wuxuuna shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay in ay ka qeyb qaataan hawlgallada ka dhanka Shabaab.
“Waxaan iclaaminayaa in dalka uu ku jiro xaalad dagaal, daagaalkana uusan noqon doonin mid hal dhinac ah. Waxaan amar ku siinnay ciidamada qalabka sida in ay heegan galaan oo ay ka qeyb qaataan nabadeynta dalka. Dagaalkan ma aha mid ciidamada oo kaliya ay qaadayaan. Waa mid aan rabno in ay shacabka garab nagu siiyaan.”
Madaxweynaha oo ku labisnaaa dharka ciidanka ayaa farriin u diray dhallinyarada Soomaaliyeed ee lagu khalday fikirka xagjirnimada ah, isaga oo u ballan qaaday in ay heli doonaan daryeel iyo soo dhaweyn haddii ay ka tanaasulaan falalka aragixisnimada ah.
“Waxaan rabaa inaan baaq cafis ah u diro dhallinyarada Soomaaliyeed ee ay shabaabku marin habaabiyeen. Dowladdu waxay ku soo dhaweyneeysaa gacmo furan, waxaan siineynaa waxbarasho ,waxaana u abuureynaa shaqooyin. Ma dooneyno inaan layno dhallinyaradeenna. Waxaan mar kale idinku baaqeynaa in aad kasoo tagtaan Al Shabaab sida ugu dhakhsiyaha badan. Waxaad haysatan muddo 60 cisho ah.”
Madaxweynaha Jamhuuriyadda ayaa sheegay in dowladda ay ku jirto saddex dagaal oo ka dhan ah argagixisada, musuqmaasuqa iyo saboolnimada, loona baahanyahay in ay ka qeyb qaataan dhammaan qeybaha bulshada.
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka tacsiyeeyay dadkii ku ku geeriyooday qaraxii foosha xumaa ee shalay ka dhacay magaalada Muqdisho, wuxuuna Alle uga baryay inuu bogsiiyo dadkii ay dhaawacyadu ka soo gaareen falkaas argagixisonimo.
Previous articleR.W Ku xigeenka iyo Mr. Gregory Gottlieb oo kulmeyn Maxay ka wada hadleen “SAWIR
Next articleDEG DEG”Farmaajo oo xilka ka qaaday Bashiir Goobe